Hydatid ရောဂါ - လူသားများတွင်ရောဂါလက္ခဏာတွေ။ Echinococcus ၏သံသရာ။ Hydatid အသည်းရောဂါ, အဆုတ်, ဦးနှောက်, နှလုံး, ကျောက်ကပ်
Hydatid ရောဂါ - လူသားတွေအတွက်သတိပေးသင့်ကြောင်းလက္ခဏာများ
လူ့ရောဂါများ Echinococcosis, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ကုသမှုကူးစက်ရောဂါဌာနဆရာဝန်နှင့်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီရောဂါဆေးဝါးကုသမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဆက်ဆံဖို့ပိုပြီးခက်ခဲသည်, ဒါကြောင့်အခြေခံကုသမှုဆရာဝန်များကကပ်ပါးပိုးများ cyst ကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားသော, ခွဲစိတ်ဖျော်ဖြေနေသည်။
Hydatid cyst - ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဘာလဲ?
Echinococcosis ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဒေသများရှိဖြစ်ပေါ်တစ်ရှားပါးရောဂါဖြစ်ပါသည်။ flatworm - ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းအေးဂျင့် Echinococcus ဖြစ်ပါတယ်။ သူလုယူရာဥစ္စာ၏သောတိရစ္ဆာန်တို့၏သက်ရှိတစ်ဦးကပ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းနှင့်သားရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကပ်ပါးပိုး၏ဥများမလွှတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှာ, လူတစ်ဦးကြားခံနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဇီဝဗေဒသေလွန်သောသူတို့သည်အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Echinococcus တီကောင်အရှည်9မီလီမီတာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ဇွဲရှိပါတယ်: ° C + မှ 30 ကို C ° -30 ကနေအပူချိန်သည်းခံနှင့်မြေဆီလွှာတွင်လကြာရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ကပ်ပါးခန္ဓာကိုယ်ကအူလမ်းကြောင်းမြို့ရိုးကိုတွဲသောအားဖြင့် sucker နှင့်ချိတ်, ရှိပါတယ်။ Echinococcus ဆိုကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအတွက် parasitize နိုင်ပါသည်, သို့သော်မကြာခဏကြောင့်အဆုတ်နှင့်အသည်းသက်ရောက်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများနှောင့်အယှက်များနှင့်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုစနစ်များအတွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု cyst ၏ echinococcosis ရရှိသွားတဲ့အခါအကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်။ cyst ကှဲထှကျဆိုးဝါးလူ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ရောဂါကူးစက်ခံရမှု echinococcus အဖြစ်?
အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးကောင်များ echinococcus ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်မတော်မတရားတိရိစ္ဆာန်များသော်လည်း, ခွေး, ကြောင်များနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှာလည်းဒီကပ်ပါးတို့ကကူးစက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရမှုတိရိစ္ဆာန်များသူတို့အပင်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါ်လဲကျရှိရာမြေဆီလွှာ, ထဲတွင်မစင်နှင့်အတူ, worm များ၏ဥများ secrete ။ ရောဂါကူးစက် echinococcosis ဆေးဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ကူးစက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Echinococcosis သူတို့ခွေးနှင့်ကြောင်နဲ့အဆက်အသွယ်သို့ လာ. , သင်၏လက်ကိုဆေးကြောဖို့မေ့လျော့ဖို့ပိုများပါတယ်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်မကြာခဏနေမကောင်းကလေးများ။
လောင်းခန္ဓာကိုယ်ဝင်။ အစာခြေလမ်းကြောင်းအတွင်းကပ်ပါးကြက်ဥနှိပ်ပြီးနောက်ကြောင့်အစာအိမ်ဖျော်ရည်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာပျော်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ အူသို့ပိုးလောင်းရွေ့လျားမိတ်ဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးသွေးကြောများကသိမ်းသွား၏။ မကြာခဏကအသည်းသို့မဟုတ်အဆုတ်အတွက်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမှတရာထဲကထက်ပို7အမှုပေါင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ပူဖောင်းဇာတ်စင်။ နောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ် hydatid ကပ်ပါးတစ်ပူဖောင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး cyst ဖွဲ့စည်းရန်စတင်ခဲ့သည်။ cyst တစ်လလျှင်မပို 1 ထက်မီလီမီတာဖြည့်စွက်, ဖြည်းဖြည်းပေါက်နေသည်။ ပူဖောင်းတဖြည်းဖြည်းအာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်နှင့်သွေးကြောအပေါ်ကိုနှိပ်, ကြီးမားတဲ့ဘောလုံးကိုသို့လှည့်။ အဆိုပါလောင်းအတွင်း၌မျိုးပွားနှင့်ဆက်စပ် cyst ၏တိုးတက်မှုနှုန်း။
သူတို့ရဲ့ဘဝလှုပ်ရှားမှုများအတွက် Tapeworm ပိုးလောင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်ထုတ်ကုန်ခွဲခြား။ ထိုအရာဝတ္ထုများ၏စုဆောင်းခြင်းမူးယစ်နှင့်အသည်းချွတ်ယွင်းစေပါတယ်။ hydatid ရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲအခါ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပြည်နယ်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုအနီးကပ်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်အသည်းရောဂါအပေါ်ကိုနှိပ်, cyst ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောနေကြသည်။ cystic ဖွဲ့စည်းမှု၏ကှဲထှကျဖို့ဦးဆောင် anaphylactic ထိတ်လန့် ခြင်းနှင့်သေခြင်း။
Echinococcus - လူတစ်ဦးရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ
hydatid ရောဂါဖွံ့ဖြိုးလပေါင်းများစွာဘို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌လူသားများအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါတောင်မှအခါ။ အရိပ်လက္ခဏာ echinococcosis ရောဂါ၏စင်မြင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်:
မျိုးကို Asymptomatic ဇာတ်စင်။ လူတ hydatid ရောဂါတို့သည် လာ. ပြီးတာနဲ့လက္ခဏာတွေသာနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်မိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာပြလိမ့်မည်။ ဤကာလအတွင်းပိုးလောင်းတစ်ဦးအမြဲတမ်းရာအရပ်ကိုတွေ့ခြင်းနှင့်ကြီးထွားဖို့အစပြုထားသည်။
လက်တွေ့သရုပ်အဆင့်။ ဤကာလအတွင်းအဲဒီမှာယားယံဖြစ်ပြီး, ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသားလောင်းများ၏ site ကိုမှာနာကျင်မှု, lethargy, အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံး, ပျို့ခံစားရရန်ကစတင်ခဲ့သည်။ အခါအားလျော်စွာ, 37,5 မှအပူချိန်မြင့်တက်° C တို့ရှိစေခြင်းငှါ
ဇာတ်စင်ရောဂါများ။ cyst ကှဲထှကျဖို့ဦးဆောင် peritonitis သို့မဟုတ် pleurisy ။ cyst ပြည်တည်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ခိုင်ခံ့သောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမြင့်တက်ပေးသည်။
အသည်း hydatid ရောဂါ
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 60-70% အတွက် Echinococcus အသည်းအတွက်ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီ။ လအနည်းငယ်နှင့်ပင်နှစ်, လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကပ်ပါးပိုး၏တည်ရှိမှုကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လူနာအသည်း hydatid ရောဂါရောဂါသည်အချိန်အားဖြင့်, လက္ခဏာများရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိမ့်မည်။ ရောဂါ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုများထဲတွင်ပုံမှန်နေသောခေါင်းစဉ်:
ညာဘက်အထက် quadrant နှင့်အစာအိမ်အတွက်နာကျင်မှုနဲ့လေးလံ;
သငျသညျဤအဆင့်မှာ cyst ကိုဖယ်ရှားမထားဘူးဆိုရင်, က cyst ခဲ့ရသောအဆင်မပြေစတင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်ပျက်မှုအိုင်းနာအသည်းဧရိယာ၌ယေဘုယျကျန်းမာရေး, ဖျားနာ, နာကျင်ကိုက်ခဲ၏ယိုယွင်းစေပါတယ်။ အဆိုပါသည်းခြေပြွန် cyst ၏ compression ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေ အသားဝါ ။ Hepatic echinococcosis ပြင်းထန်မတည့်တုံ့ပြန်မှု, anaphylactic ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့် peritonitis စရာတွေ cyst ကွာဟမှု။ ခန္ဓာကိုယ်အလယ်တန်း echinococcosis ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သည့် cyst ရဲ့ contents ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
အဆုတ် hydatid cyst
hydatid ရောဂါ, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်လူ့ရောဂါကုသမှုလေ့လာနေဆရာဝန်များကပ်ပါးရောဂါပိုးများဖြစ်ပွားမှု၏ 15 မှ 20% ကနေအဆုတ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသတိပြုမိပါပွီ။ ထိုသို့ဆက်ဆံဖို့ခက်ခဲအစာရှောင်ခြင်း-PACE နှင့်ခက်ခဲပြေးကြောင့်ရောဂါမျိုးအန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးကျော်အလွယ်တကူပူတဲ့ရာသီဥတုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကျွဲနွားမွေးမြူရေးနှင့်အတူတိုင်းပြည်များတွင်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ အဆုတ် echinococcosis မကြာခဏတစ်ခုတည်းအခန်းထဲကပုံသဏ္ဍာန်ရှိခြင်း, မျိုးစုံ cyst ကဖွဲ့စည်းသည့်အခါ။
Echinococcosis အလင်းဘေးဒဏ်သင့် echinococcosis ၏အဓိကခန္ဓာကိုယ်မှရောဂါကူးစက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, မူလတန်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်းရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအဆုတ်တစ်ရှူးတစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိပါတယ်အဖြစ်တစ်ဦး cyst ကြီးမားသောအရွယ်အစားအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်အရည်များအများအပြားလီတာဆံ့နိုငျသညျ။ သငျသညျအဆုတ် echinococcus ဖွံ့ဖြိုး အကယ်. ထိုကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်:
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ, bronchospasm ;
အဆုတ် echinococcosis, အသက်အန္တရာယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရောဂါများ။ cyst ပြည်တည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုအိုင်းနာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သည်။ အဆိုပါ cyst အဆိုပါ bronchi သို့သွားရမည်လျှင်, စိတ်ရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အပေါများ expectoration နှင့်အတူမွန်းကျပ်၏အကြိမ်ကြိမ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ pleural လိုင်အတွက် cyst အောင်မြင်မှုများ pleurisy နှင့် pneumoempyema နှင့် pericardium စေပါတယ် - တစ်ဦးနှလုံး tamponade ။ cyst ကှဲထှကျအမြဲ anaphylactic ထိတ်လန့်မှုအန္တရာယ်ကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။
ဦးနှောက် hydatid ရောဂါ
ဦးနှောက်၏ hydatid ရောဂါ - တစ်ရှားပါးရောဂါဖြစ်ပါသည် echinococcus ကူးစက်မှုအားလုံးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်. 3% ဖြစ်ပါတယ်။ Echinococcosis ဦးနှောက်အသည်းရောဂါသို့မဟုတ်ကပ်ပါးအဆုတ်နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီရောဂါကိုယ်နှိုက်ဟာတိုကျရိုကျ, occipital နှင့် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏အဖြူရောင်အမှု၌ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသော cyst ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တငျပွ။ ရောဂါ၏ဤပုံစံနှင့်အတူအကွိမျမြားစှာ cyst ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးနှောက် hydatid ရောဂါဖွံ့ဖြိုးလိုလျှင်လူသားများအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေပါဝင်နိုင်ပါသည်:
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ hydatid ရောဂါ
Echinococcosis ကျောက်ကပ် hydatid ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အပေါငျးတို့သအမှုပေါင်းတို့တွင်အသတ္တမရာအရပျ၌တည်ရှိ၏။ အဲဒီမှာရောဂါနှစ်ခုပုံစံများနေသောခေါင်းစဉ်: တစိတျအပိုငျးနဲ့ multi-အခန်းထဲက cyst, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးပုံစံကိုပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အူ, အသည်း, သရက်ရွက်, မြှေး: အ cyst အတွက်ခိုင်မာတဲ့တိုးကပ်လျက်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်လျှင်။ ပြည်တည်ကပ်ပါး cyst ဟာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်များမှဦးဆောင်သောကြောင့် rupture နှင့်ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိအကြောင်းအရာများကို၏သှနျးလောငျးစေနိုငျပါသညျ။
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ echinococcosis လက္ခဏာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာခန္ဓာကိုယ်ရေတံခွန်ထဲမှာကပ်ပါးပြီးနောက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကကျောက်ကပ် hydatid ရောဂါဖွံ့ဖြိုးလျှင်, ရောဂါလက္ခဏာတွေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသာ cyst ကှဲထှကျသို့မဟုတ်သူမ၏ခိုင်မာတဲ့တိုးပြီးနောက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤရောဂါတွင်ထိုကဲ့သို့သော features တွေညွှန်ပြစေခြင်းငှါ:
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ colic ;
နှလုံး hydatid ရောဂါ
နှလုံး Hydatid ရောဂါကပ်ပါးပိုး echinococcus နှင့်အတူကူးစက်တစ်ဦးချင်းစီ၏ 0.2-2% ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တီကောင်သွေးကြောများမှတဆင့်နှလုံးကြွက်သားအတွက်ရောက်ရှိမကြာခဏလက်ဝဲ ventricle အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။ လူသားများတွင်ရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ခြင်းသည်အထိ cyst ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အထိငါးနှစ်အတွင်းရှိနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေအခက်အခဲနှင့်အတူရောဂါနှလုံးရောဂါ, ဆင်တူနှလုံး, ၏ Hydatid ရောဂါ။ cyst ၏ရင့်ကျက်လူနာများ၏ထိုကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်:
စှနျး၏ cyanosis ။
ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်တိကျသောရောဂါလက္ခဏာမရှိခြင်း၏အစောပိုင်းအဆင့်မျိုးကို Asymptomatic အချိန်မီရောဂါခက်ခဲ echinococcosis ။ လူနာရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းစုဆောင်းလိုက်တဲ့အခါသင့်ဆရာဝန်ကိုလူနာတိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့်အတူဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါရှိမရှိစဉ်းစားသင့်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရောဂါဧရိယာ၌ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုမကြာခဏရှိ၏။ tapeworm မှပဋိပစ္စည်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့သွေး, ဆီး, သလိပ်, ဓာတ်မတည်စမ်းသပ် Casoni နှင့် Echinococcus အသွေးတော် (serological တုံ့ပြန်မှု) ၏ဇီဝဓါတုဗေဒ: အသုံးဓာတ်ခွဲခန်းနည်းလမ်းများ၏ရောဂါနှင့်ဖယ်ရှားရေးအတည်ပြုရန်။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင် Echinococcus အဘို့စမ်းသပ်ဆာပနည်းလမ်းများဖြည့်စွက်:
ဝမ်းဗိုက် ultrasound သို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို;
ဦးနှောက်မှန် CT သို့မဟုတ် MRI;
radiography နှင့်ရင်ဘတ်မှန် CT scan,
EhoKS, coronagraph, ECG,
ယင်းဟာ Celiac စည်၏ angiography ။
Hydatid ရောဂါ - ကုသမှု
အဆိုပါကပ်ပါး Echinococcus permeates နှင့်မကြာခဏခက်ခဲနှင့်ကုသမှု echinococcosis reinfection မှဦးဆောင်နိုင်အောင်, ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဆေးပညာမှာတော့အခါရင်းနှီးမြှပ်နှံ hydatid ရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သည်လူသားများ၌ဤရောဂါ၏လက္ခဏာများ cyst သူ့ဟာသူသေပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်အလွန်ခဲတွေ့ကြုံတတ်၏။ ယခုအချိန်တွင်မှာ hydatid ရောဂါကုသရန်တဦးတည်းထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းရှိသေး၏။ ကျနော်တို့ခွဲစိတ်အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ ကသာကပ်ပါး cyst ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်ကိုအသုံးပြုသည်ဒါခွဲစိတ်ကုသခြင်းမရှိဘဲ anthelmintic ကုထုံးလိုချင်သောရလာဒ်များကိုမပေးပါဘူး။
echinococcosis ၏ကုသမှုအားလုံးနည်းစနစ်များ, ခွဲစိတ် မှလွဲ. သံသယများနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအတည်ပြုခဲ့သည်ကြပြီမဟုတ်ဖြစ်ကြသည်။ တိုင်းရင်းဆေးအဘယ်သူမျှမမှာဆေးကုသမှုမဆိုနည်းလမ်းကပ်ပါးပိုးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းများကမ်းလှမ်းပေမယ့် cyst ၏အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်၎င်းတို့၏အဆောက်အဦလျှော့ချပေးပါတယ်။ Echinococcus ခန္ဓာကိုယ်ဖော်ထုတ်အတွက်ချက်ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကနေကပ်ပါး၏ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားကိုလက်ခံရပေမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ထိုအဆက်ဖြတ်ပြင်းထန်သည့်ရောဂါများနှင့်သေခြင်းဆီသို့ဦးတည်ရာ, cyst စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။
Echinococcosis - အကြံပြုချက်များ
သူ၏အသက်တာအဆိပ်သက်ရှိများလဲလှယ်ထုတ်ကုန်တစ်လျှောက်လုံးအဆိုပါကပ်ပါး Echinococcus ။ ဤသည်လူနာနှင့်အသည်း၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဦးနှောက်၏အလုံးစုံကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေကပ်ပါး၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်ဘေးဒဏ်သင့်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်သာ restore လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။
လတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင် Walking ။
Echinococcosis - မူးယစ်ဆေးဝါးများ
Hydatid ရောဂါရှုပ်ထွေးပြီးကပ်ပါးရောဂါပိုးဖြစ်ပါတယ်။ တီကောင် Echinococcus တွင်နီးပါးမျှအကျိုးသက်ရောက် pharmacological မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရိုးရာဆေးပညာဆေးဝါးများ။ Antiparasitic ကုထုံးဟာ cyst ၏ယစ်မျိုးပြီးနောက်ဖျော်ဖြေနေသည်။ ထိုသို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းပါဝင်သည်:
albendazole, mebendazole, praziquantel: ဇီဝဖြစ်စဉ်ကပ်ပါးကောင်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များချိုးဖောက်များအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်။
ကပ်ပါးကောင်အတွက်သွက်ချာပါဒဖြစ်စေတဲ့ဆိုလိုတယ်: pyrantel, Levamisole, Niclosamide ။
Echinococcus - စစ်ဆင်ရေး
ရှုတ်ထွေးနေသော cyst ကိုဖယ်ရှားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွဲစိတ်စဉ်အတွင်းဆရာဝန်ကဖြတ်မထားဘူးနှင့်၎င်း၏ contents တွေကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးပျံ့နှံ့မ, အရေးကြီးပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်တစ်ဦးကပ်ပါးတို့က postoperative ပြဿနာများနှင့်အလယ်တန်းရောဂါကူးစက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ သငျသညျတစျခုလုံးကို cyst ကိုဖယ်ရှား, သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုမှစိုက်ပျိုးထားပြီးဘယ်မှာကိစ္စများတွင်မနိုင်သည့်အခါယစ်မျိုးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲကယူသွားတတ်၏။ cyst, ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ကြသည်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခက်ခဲနေသော, ကိုယ်ခန္ဓာခွဲစိတ်, content တွေကိုပိုးသတ်ဆေးနှင့် antiparasitic ဖြေရှင်းချက်နဲ့ကုသနှင့် sutured ဖြစ်ပါတယ် suctioned ။
ခွဲစိတ်မှု၏ထိရောက်မှုကို၎င်းကပ်ပါး cyst အရေအတွက်, သူတို့ရဲ့အရွယ်အစား, တည်နေရာ, အခြားအကောင်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခက်အခဲများဤကိစ္စတွင်အတွက်ကြောင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပျက်စီးစေဖွယ်ရှိသောကွောငျ့ Echinococcus, ဦးနှောက်ဖယ်ရှားရေးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ မျိုးစုံ echinococcosis အဆုတ်အတွက်ဆရာဝန်များကခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးချုံ့သောသူတို့ကို cyst ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်ကလူသား၏ဘဝတိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လုံးဝကြောင့်ကုသပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
လူ့အတွက် Echinococcus ခက်ခဲရောဂါနှင့်ဆိုးဝါးဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, စောင့်ရှောက်မှုဤရောဂါကူးစက်ဖို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်မှုယူသင့်ပါတယ်:
ပြည်တွင်းခွေးပုံမှန်အစည်းအဝေး deworming ကိုင်ထားပါ။
နှလုံးနာကျင်မှု - ရောဂါလက္ခဏာ
အဆိုပါကလေးသည်အပူချိန်မပါဘဲ vomits - ဘာလုပ်ရမှန်း?
အဆိုပါသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောအတွက် polyps - ကုသမှု
အသည်းရောဂါလက္ခဏာများ - သတိပေးသင့်တယ်သောမျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အရိပ်လက္ခဏာ,
တွမ် Ford ကားတရားသူကြီးတွေလဒ်ထိုးခဲ့ကြတယ်စွပ်စွဲနေသည်
လက်ဖက်ရည်အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ - လက်ဖက်ရည်ထိပ်တန်း 11 အရှိဆုံးအသုံးဝင်သောအမျိုးအစားများ
ဂျင်းချောင်းဆိုး - စာရွက်
အဆိုပါရေဆေးဖျင်ခင်း - ပြီးပြည့်စုံသန့်ရှင်းမှုနှင့်ထွန်းလင်းဘို့ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များ
ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ - နွေရာသီ 2016
ထောပတ် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး